राहुल गान्धीले जन्मदिन नमनाउने, यस्तो छ कारण ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/राहुल गान्धीले जन्मदिन नमनाउने, यस्तो छ कारण !
राहुल गान्धीले जन्मदिन नमनाउने, यस्तो छ कारण !
काठमाडौं । भारतको प्रमुख विपक्षी दल भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी शुक्रबार ५० वर्षमा लागेका छन् । तर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उनले आफ्नो ५० औँ जन्म दिनका अवसरमा भने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने भएका छन् ।
भारत र चीनबीचको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा भएको हिंसामा परी भारतका सैनिक मारिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो ५० औँ जन्मोत्सव नमनाउने बताइएको छ । भारत र चीनबीचको लद्दाखस्थित ग्वालन भ्यालीलीमा यही जुन १५ को राति भारत र चीनका सीमा सुरक्षा सैनिकबीच झडप भएको बताइएको थियो । त्यस झडपमा भारतका कम्तीमा पनि २० जना सैनिकको ज्यान गएको भारतले जनाएको छ ।
त्यस्तै चीनका सैनिक पनि सो हिंसामा परी मारिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएको भए पनि यस विषयमा चीनका तर्फबाट भने केही आएको छैन । त्यसैले आज परेको उनको जन्मदिनका अवसरमा देशभरका कांग्रेसका कार्यसमिति तथा विभागहरुलाई पनि केक काट्ने या त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न भारतीय कांग्रेसले नै सूचना जारी गरेको छ ।
देशमा दिन प्रतिदिन कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको ज्यान गइरहेको तथा उता लद्दाखमा चिनियाँ सेनासँगको झडपमा परेर आफ्ना सैनिक मारिएकोले देशमा महोत्सव गर्ने अवस्था नरहेको गान्धीले बताए ।
बरु अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई औषधि तथा खानाका प्याकेटहरु बाँडेर उनीहरुलाई सहयोग गर्नु भनी कांग्रेस पार्टीले सूचना जारी गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
७ वर्षदेखि ब्लड क्यान्सरसँग लडिरहेका छन् यि बालक: लकडाउनले खानपिनमा नै समस्या , अन्तरवार्तामा नै आमा भक्कानिइन्